MX Linux: Dzazvino nhau dzemwedzi waKukadzi 2020 | Kubva kuLinux
Linux Tumira Kuisa | | GNU / Linux, Noticias
Kutora mukana we, pakati pezvimwe zvitsva, izvo zvinozivikanwa uye zvinoshandiswa Distro MX Linux, sekutanga kwemazuva mashoma apfuura ayo 19.1 version, uye zvakasiyana "AHS", isu tichataura pane zvimwe zvakaitika mumwedzi waKukadzi 2020.
MX Linux, kune avo vasinganyatso kuziva nezvazvo, iri a GNU / Linux Distro yakagadzirwa kubva mukudyidzana kusimudzira pakati penzvimbo dziripo dze Distros "antiX" uye yaimbova "MEPIS". Kukonzera mukati, a Yemazuva ano, yakajeka, ine simba uye ine hushamwari distro.
Nguva dzekupedzisira pane blog, kwataitaura nezve iyo yazvino vhezheni (19 - Ugly Duckling), ndipo pandakanga ndiri mukati beta chikamu uye payakaburitswa zviri pamutemo se shanduro yakagadzikana. Neichi chikonzero, tinokurudzira kuti avo vanofarira vaverenge zvinyorwa zvakapfuura kuti vadzike zvishoma nezvazvo.
Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kubva ku yazvino vhezheni (19 - Ugly Duckling) inotevera:
"MX Linux inomira pakati pevakawanda, nekuti idzi Nharaunda dzakapa maturusi avo akanakisa uye matarenda ekugadzira un Kugoverwa kweGNU / Linux akareruka asi akasimba, Yakagadzirwa pasi pechirevo chekupa a inoyevedza uye inoshanda desktop neyakareruka kumisikidza, kukwirira kugadzikana uye kuita kwakasimba. Uye zvese izvi muIO saizi saizi diki inokwana kurodha pasi, kushandisa, uye kuendesa.". Previous Post: MX Linux 19: Iyo nyowani vhezheni yakavakirwa paDEBIAN 10 yaburitswa
0.1 Dzazvino nhau Kukadzi-2020 yeMX Linux 19 - Ugly Duckling
0.2 VirtualBox yakagadziridzwa kuita vhezheni 6.1.2 - 5 / Feb
0.3 Shanduko mumahofisi epamutemo - 10 / Kukadzi
0.4 Fluxbox Yakabatanidzwa Yakagadziriswa Kugadziridza - Kukadzi 15
0.5 Kutanga kweiyo nyowani vhezheni MX Linux 19.1 - 15 / Feb
Dzazvino nhau Kukadzi-2020 yeMX Linux 19 - Ugly Duckling
VirtualBox yakagadziridzwa kuita vhezheni 6.1.2 - 5 / Feb
Iyi yekuvandudza yakawedzerwa nekuti, uye mukutaura mazwi eayo epamutemo Package Repository Manager:
"… Pakave nekuwanda kwekugadzirisa madhigi uye kugadzirisa kubva pane yazvino vhezheni, uye yazvino vhezheni haizovake mamodule ayo pane nyowani 5.4+ kernels saka iyi yekuvandudza inodiwa".
Kugadzira kurudziro yenguva dzose kana "kuita kwakanaka" kana uchiita zvakafanana, ese Virtual Machines (VM) "akaponeswa" kana "akamiswa" eVirtualbox anofanirwa kuramba asati ambo gadziridza, kana zvikasadaro pane njodzi yekuti Vanogona kusashanda mushure mekuvandudza.
Shanduko mumahofisi epamutemo - 10 / Kukadzi
Iyi yekuvandudza yakaitwa pasi pekupokana kwe:
"Icho chikonzero ndechekubvumidza kwakanyanya kuchinjika kune ese ari maviri antiX uye MX kukudziridza akakosha mavhezheni emapakeji pasina kutsika pane mumwe nemumwe. Hukama pakati peantiX neMX hauna kuchinja chero nzira".
Kunyanya, shanduko inoreva kune icho icho Antix zvinyorwa yakagadzirirwa mufaira "/Etc/apt/source.list.d/antix.list" ivo vanozove vakaremara (kubviswa) nekutadza. Kujekesa kuti hapana mamiriro ezvinhu izvi zvinomiririra kubviswa kwepakeji, nekuti ese aripo achazotamiswa kana kubatanidzwa kupinda mu MX-Linux repository (/etc/apt/source.list.d/mx.list).
Fluxbox Yakabatanidzwa Yakagadziriswa Kugadziridza - Kukadzi 15
Shanduko kana kunatsiridza kwakaitwa kune kunonzi kumisikidzwa MX-Fluxbox 2.0 inosanganisira izvo zvataurwa pazasi, pakati pevamwe vazhinji:
Kubatanidzwa kwakazara neiyo Inesisitimu Sisitimu, ichibvumira kubaya kumwe chete kuti uwane chikamu cheMX Zvishandiso uye uwane menyu yakazara yeXfce4.
Kuwedzeredzwa kwegrafical hardware rutsigiro, nekuda kwekushomeka zviwanikwa zvinodiwa.
Kugadzirwa kweDock uye vatambi vanofambiswa newmalauncher.
Tsigiro yeGTK 2 madingindira (kutaridzika).
Kusimbisa izvo zvataurwa, MX-Fluxbox 2.0, yakatove yakabatanidzwa mu ISO de MX-19.1.
Kutanga kweiyo nyowani vhezheni MX Linux 19.1 - 15 / Feb
Iyi yekuvandudza inogona kuitiswa pachishandiswa yakapusa yakajairwa yekuvandudza kuburikidza neconsole kuburikidza nemirairo kana kuburikidza neye graphical chishandiso chekuvandudza mapakeji. MX Linux.
Mumashoko evakagadziri vayo, ndeiyi:
"… Iyo yekuvandudza kune yedu MX-19 vhezheni, ine zvigumbuso zvinogadzirisa uye mashandisiro ekushandisa kubvira yedu yekutanga MX-19 kuburitswa. Kana iwe uchiri kutomhanya MX-19, hapana chikonzero chekuisazve. Mapakeji ese anowanikwa kuburikidza neyakajairwa gadziriso chiteshi".
Pakati pezvakanyanya kukosha pane ino gadziriso, zvinoratidzika kuti ikozvino kune bazi idzva rakadaidzwa AHS iyo inobva muchidimbu chemutsara muChirungu "Advanced Hardware Rutsigiro" iyo inoshandura muchiSpanish, senge «Advanced Hardware Support». Izvo zvakafanana, ndeye chete 64 bits, uye pakati pezvimwe zvinhu zvinosanganisira mukana wekunatsiridza kune a Debian 5.4 kernel, Tafura 19.2 Graphics Raibhurari, uyezve chitsva kwaari Server X.
Iyi yekuvandudza inogadzirisazve iyo yemuno repository ye MX-Linux (/etc/apt/source.list.d/mx.list) zvinotevera:
Kusiya kungwara kwemushandisi, gonesa iyo AHS repository uye shandisa zvidzoreso, kuburikidza neterminal kana graphically. Kwezuva, kubva pakudhindwa kwechinyorwa ichi, zvinondibvumidza kuisa uye kugadzirisa anotevera mapakeji, ndega MX Linux 19 kushandiswa:
Mapakeji matsva ekuisa:
Mapakeji aripo ekuvandudza:
Aya uye rumwe ruzivo rwunouya kana nhau dzinogona kuwedzerwa mu Distro MX Linux blog.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" pamusoro penyaya dzichangoburwa kubva kuDistro «MX Linux» mukati memwedzi wa «Febrero de 2020», ive yekunakidzwa uye yekushandisa, yeiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » MX Linux: Dzazvino nhau dzemwedzi waKukadzi 2020
RawTherapee 5.8 inosvika nerutsigiro rweRAW muCR3 fomati uye nezvimwe